Pakati pevhesi yenguva yakawanda inotungidzika moto muvira muChina
musha / Induction Inoyunguta Moto / Sirimbi Iron Melting Furnace / Medium Frequency Coreless Inopisa Vira
Nguva Yakawanda Yakawandisa Isingasviki Mafuta
Categories: Electric Furnace, Igbt tilting induction yakanyungudusa chira, Induction Inoyunguta Moto, Metal Melting Furnace, Sirimbi Iron Melting Furnace Tags: Tenga moto usinganetsi, Tenga nguva yakawanda yevhenekeri inenge isina kubwinya, chisina kunyanya kutengesa vhuni, coreless kutengesa furna, intion fireless melting furnace, Pakati pevhesi yenguva isina tanhi, Pakati pemhepo inenge isina simba, Pakati pevhesi yenguva yakanyunguduka yevira, medium frequency coreless melting system, MF inenge isina kusungirwa kwevira, MF inotungidzirwa yevira inotengesa, MF inenge isina kusungirwa mukati mevira
Nguva Yakawanda Yakawanda Yisina Kuchengetera Motokisi | Induction Iron Steel Yakawandisa Inopisa Moto
1) Chiremera Chimiro chisina kunyanya kusvibiswa
3.Ukushandisa: Nguva yakawanda yevhenekeri inenge isina simba inoshandiswa zvikuru inoshandiswa mukunyungudzwa kwesimbi, simbi, mhangura, aluminium uye alloy, ine kunyanya kusvibiswa kwepamusoro, kunaka kwechigadzirwa chemagetsi, kushandiswa kwemasimbi mashoma, kupera kwekutsvaira, kukurumidza kutonhorera kukwira, kushandiswa nyore kwekushisa, kwakakodzera kune marudzi ese esimbi yakanyunguduka.
Iko inducted coil kurasikirwa kwepakati pevhesi isina kunyanya kuvira kwevhidhiyo yeA25% yesimba rose, saka svesayenzi uye mazano ekugadzirisa epiil inonyanya kukosha. Kana tichigadzira coil, tinoshandisa tU1 anoxia shavha yepamusoro mumhangura yealuminiyumu, uye pamwe chete wekilori inogamuchira mashekeri esirivha akareba, ayo ane hutsika hwakanaka uye kurasikirwa kuduku. Kuti Uve nechokwadi chekutarisa kwakanakisa kwekutendeuka, kushandiswa kwezvinhu zvinoshandiswa zvinoshandiswa pakati pekutendeuka, kuvhara kwemazinga kunoshandiswa uye huwandu hwemagetsi ehupfumi hunowanikwa.
Pakati penzvimbo isina hunyoro yakanyunguduka moto ichishandisa chamupupuri uye kudivi kwekutsva kupisa- kuchengetedza chivharo chevira, guruva hood (mhete) kuburikidza neimwe mweya inonanzva guruva, gasi remarara rinogadzirwa nekunyungudika, kusvika nekuvandudza mhedzisiro yekubuda kwechisimba, kusangana nezvinodiwa zvezvemamiriro ekunze. dhizaini yekuongorora.
※ Chiremera chemasvikiro epakati pekunyanya kusina chinokonzerwa nehuwandu hwesimbi 7.8 (hukuru hwealuminium 2.7, saka aluminium inokosha zvakaenzana: simba rinofananidzwa ndiro rakafanana, uye simba rinoda x 3 nguva dzomuviri wevira )